Shikhar Samachar | एक घर एक रोजगारी : उप–प्रमुख रावल एक घर एक रोजगारी : उप–प्रमुख रावल
एक घर एक रोजगारी : उप–प्रमुख रावल
प्रकाशित मिती: २०७७ असार २२
पढाई प्रौढ कक्षा तर स्पष्ट र परिपक्व निर्णय गर्न सक्ने शिखर नगरपालिकाकी उप –प्रमुख धौलीदेवी रावल राजनीतिलाई पेशा मान्दिनन् । उनी आफ्नो पेशा कृषि मान्छिन् । सफल कृषकका रुपमा बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुँदा गर्दा राजनीतिमा प्रबेश गरेकी उनी स्थानिय तहको निर्वाचन पछि एकाएक फरक भुमिकामा देखा परिन् । जिल्लामा सफल किसानका रुपमा चिनिएकी उनी पछिल्लो समय सफल जनप्रतिनिधीका रुपमा चिनिदै आएकै छिन् । निर्वाचन अघि रावल स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाका रुपमा पनि कार्यरत थिइन् । उनै उप –प्रमुख रावलसँग शिखर समाचारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश !
१ ) उप–प्रमुख ज्यू, शिखर समाचारमा स्वागत छ ।
२) अहिले कता व्यस्त हुनुहुन्छ ?
कोरोना संक्रमण कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमै बढी तल्लीन छौं । संक्रमीतको संख्या दैनिक बढीरहेको छ । उहाँहरुको बन्दोबस्त, उपचार तथा स्याहारमा खटिएका छौं । अस्ति १० गतेमात्र निती तथा कार्यक्रम पेश ग¥यौं । चाँडै जनमुखी बजेट सम्पन्न गर्ने गरी वडाहरुबाट योजना छनोट गर्न ब्यस्तता बढेको छ ।
३) जनप्रतिनिधीका रुपमा तपाई आइसकेपछि जनताले के पाए ?
मलाई राजनीतिमा फस्का (गफ) मार्न धेरै आउदैन । तर जनप्रतिनिधीका रुपमा आइसकेपछ गरेका कामहरुको सूची लामो छ । हामिले निर्वाचनका बेला जनतासंग गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम गरिरहेका छौं । जनाता सँग गरिएका वाचाहरु आफ्नो कार्यकाल भित्र पुरा गर्ने गरी जनाताको सेवामा तल्लिन छौं ।
निर्वाचन अघि शिखर नगरपालिका संरचना बिहीन थियो । केही वडामा मात्र सडक बिस्तार थियो । धेरै बस्ती बिद्युत नभएर अन्धकारमा थिए । शिखरको वडा नं. ११ को मल्लीसात सबैभन्दा बढी पिछडिएको बस्ती मध्य पर्छ । चुनावका बेला त्यहा महिला दिदिबहिनीहरुले सडक, स्वास्थ्य, बिद्यालय र बिद्युत मागेका थिए । त्यस बस्तीमा कलिला उमेरका बहिनीहरु प्रसुतीका लागि स्वास्थ्य चौकी आउदा आउदै बाटोमै बच्चा पाउथे । रुखमा, झाडीमा कतिपयले बच्चा जोगाउन सके, कतिपयले सकेनन् ।
यस्तो परिस्थितीमा हामी निर्वाचीत भएर आयौं । नगरको कुनै संरचना नहुँदा एक बर्ष हामी भाडामा बस्यौं । दोस्रो बर्ष जिल्लाकै नमुनाका रुपमा स्थाइ संरचना बनाएर सेवा प्रदान दिइरहेका छौं । सबै वडामा सडक बिस्तार गरि सक्यौं । नगरबासीलाई छोटोदुरीको यात्राका लागि निकै कष्ट थियो । हामीले आफ्नै नगरबस ल्याएर सुबिधा दिएका छौं । शिखर नपाको वडा नं. ११ मल्लीसातमा निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार सडक पु¥याइसक्यौ । गतबर्ष माबि बिद्यालयका रुपमा नगरकै लगानीबाट स्तरोन्नती ग¥यौं । पहिलो आर्थिक बर्षको चार महिनाभित्र त्यहाँका महिला दिदीबहिनीका लागि हामीले स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिदियौं । अब बिद्युत पु¥याउन बाँकी छ । मल्लीसात र वडा नं. १० को थाप्सा र बनेलेक बाहेक सबै ठाउमा बत्ती पु¥याएका छौं । ती बस्तीमा पनि दशैभित्र बत्ति पु¥याइसक्ने प्रतिबद्धता छ । ५ बिद्यालयका ब्लक बनाएका छौं , बिद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम सुरु गरेर परिवर्तन ल्याइसकेका छौं ।
४) आगामी आवको लागि के नीति प्रस्तुत गर्नुभएको छ ?
कोरोना संक्रमण न्युनीकरणका लागि बिभिन्न गतिबिधीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसपछि भारतबाट शिखरमा झण्डै ५ हजार युवाहरु रोजगारी गुमाएर आउनु भएको छ । उहाँहरु प्रति हामी चिन्तित छौं । त्यसका लागि रोजगारी सृजना कसरी गर्ने भनेर नीतिमा जोड दिइएको छ । कृषि, पशुमा बढी जोड दिएका छौं ।
५) एक घर एक रोजगारीको नारा के हो ?
विकास निर्माणका काम विगतमा उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने गरेका थियौं । मेसिन उपकरणले काम गर्दा स्थानियले खासै काम पाउन सकेका थिएनन् । तर आगामी बर्षमा फरक तरिकाले अघि बढ्छौं । बिकास निर्माणमा एक घरको एक सदस्यलाई सहभागि गराएर दैनिक ज्याला दिने सर्तमा रोजगारी दिने तयारीमा छौं । त्यसबाहेक बिभिन्न सीपमुलक तालिम दिने, उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने पनि हाम्रो नीतिमा उल्लेख छ ।
६) योजनाहरुमा ब्यापक अनियमीतता भइरहेको गुनासो सुनिन्छ । काममा गुणस्तर पनि छैन । तपाईले कसरी अनुगमन गरिरहनु भएको छ ?
अरु स्थानिय तहमा के भइरहेको छ । मैले जान्ने कुरा भएन । तर मैले अनुगमन कार्य तिब्र पारेकी छु । यस्तै अनियमीतता हेर्न एउटा योजना ४ पटकसम्म अनुगमन गरेकी छु । प्राबिधीकहरुलाई समेत कडाई गरेर वास्तबिक इष्टीमेट गर्न लगाइरहेको छु । वडा नं. १० को खन्नेखोला सडक अनुगमन गरेर फेरी काम गर्न लगाएको मैले नै हो । ३ वटा मोड साघुरो भएकाले गाडी उकालो चढ्दै नचढ्ने रहेछ । फेरी मोडहरु चौडा गराउनुका साथ ग्रेड मिलाएपछि मात्र भुक्तानी गराएकी छु । वडा नं. ६ को पनि एउटा कुलो पुन ः बनाउन लगाए । स्टीमेट भन्दा फरक कुलो बनाइएको थियो । मैले स्टीमेट अनुसार भएन भने भुक्तानी रोकिदिन्छु भनेर फेरी काम गराए । शिखर नपा वडा नं. ८ को ग्वाले देवता मन्दिरको पर्खाल त भत्काउनै लगाए । पर्खाल भत्काएर फेरी बनाएपछि मात्र काम अघि बढ्यो । यी केही घटनामात्र हुन् । म प्राबिधीक मान्छे होइन तर आफुले जानेबुझे जति मैले अनियमीतता रोक्न लगाएकी छु ।
७) न्यायीक समितिको काम कस्तो भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म २४ मुद्धा आएका छन् । त्यसमध्य २ सम्बन्ध बिच्छेद भएका घटना थिए । मेरो क्षेत्राधिकारमा नरहेकाले अदालत पठाएकी छु । त्यसबाहेक २२ मुद्धा भने मैले समयमै फैसला गरेकी छु ।